Realme na -ekwupụta ekwentị mkpanaaka igwefoto ya nke 64 MP Androidsis
Realme anọwo na -arụ ọrụ dị ukwuu n'ahịa ruo ọnwa ole na ole, site na ibu ọrụ dakwasịrị ya n'ihi mba ụwa ọhụrụ ya. Ma ọ bụ ya ụlọ ọrụ abanyela China nke ọma y nwere dị ka ebumnobi ya na -esote Europe dum Ị gaghị enwe ike ịnweta obere nkọwa nke smartphones. Ọ bụ ya mere o ji na -eme atụmatụ ibido ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ abụọ, nke bụ 5 bu eziokwu y 5 Pro, na otu nwere Igwefoto megapixel 64.
Nke ikpeazụ enwebeghị aha azụmaahịa, mana n'oge na -adịghị anya a ga -ekpughere ya, dịka onye nrụpụta kpughere n'oge na -adịbeghị anya na eA ga -etinye ihe nrụpụta a kpọtụrụ aha na modul foto n'azụ yana ihe mmetụta atọ ndị ọzọ.
Na ihe omume nke ụlọ ọrụ ahụ mere taa, mbata ọzọ nke ngwaọrụ ahụ nwere Samsung ISOCELL Bright GW1 igwefoto nwere mkpebi megapixel 64. Na mgbakwunye, ekwuputara na ihe mkpalite a ga -adị na sistemụ igwefoto okpukpu anọ, dị ka anyị hụburu. Ọnụ a ga -abụ onye ga -ama ya aka kpọmkwem Xiaomi na -abịa na ekwentị 64MP sensọ mbụ, nke dị na atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ.
Onye na -ejide 64 MP ga -abụ ihe kacha adọta ya, ebe igwefoto atọ ndị ọzọ nwere oghere oghere sara mbara nke ukwuu, nnukwu ihe, na ihe omimi. N'aka nke ọzọ, maka igwefoto selfie, enwebeghị ozi ọ bụla, mana nke a agaghị abụ nke na -adọtakarị, n'ezie.
Onye isi Realme India Madhav Sheth gosipụtara nke ahụ Companylọ ọrụ ahụ ga-ebido igwefoto ekwentị atọ n'ihu Diwali (ememme Hindu ogologo ụbọchị ise) n'afọ a. A ga-ewepụta ekwentị ọhụrụ atọ a n'okpuru usoro Realme, Realme Pro na Realme X. Sheth gwukwara n'ime Xiaomi wee kwuo na Realme na-enye ahụmịhe aka mbụ nke ụwa kama igosi ihe ngosi mmịfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe mbụ ihe mmetụta sensọ 64MP Realme batara bụ igwefoto quad n'azụ